TOPNEWS:-Shirka Wasiirada Maaliyadda oo ka socda Kismaayo |
TOPNEWS:-Shirka Wasiirada Maaliyadda oo ka socda Kismaayo
Kismaayo (Raaso news 24 ):- Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubbaland waxaa maalinkii Labaad ka socda shirka Wasaaradaha Maaliyadda Dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya Wasiirada Maaliyadda, waxaana looga hadlayaa arrimo fara badan oo la xiriira dhaqaalaha, sida loo wadaagayo kheyraadka, sida loo wadagayo dhaqaalaha caalamka ka imaanaya iyo xaqa ay kala leeyihiin Dowladda iyo Dowlad goboleedyada.
Madaxweyne ku-xigeenka Koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka mid ahaa masuuliyiinta lagu casuumay furitaanka shirkan ayaa Wasiirada ku dhiirageliyay inay kordhiyaan shaqooyinka wanaagsan ee ay u hayaan bulshada.
“Wasaaradaha halkan ku kulansan ee Maaliyadda, waa laf dhabarkii dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada, waad la socotaan rag aan tashan waxba ma qaban karaan, cid walbana ay leedahay waajibaad, masuuliyadda xoogeeda inaga ayay nagu dhaceysaa, side kheyraadka loo wadaagaa, side loo wadaagaa dhaqaalaha ka imaanaya caalamka, dhammaan hawlahaas waxaa looga baahan yahy inay sameeyaan Wasiiradda Maaliyadda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada”. Ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland.
Shirkan ayaa waxaa la filayaa in la soo gaba gabeeyo maalinta berri ah, waxaana qorshaha uu yahay in laga soo saaro war-murtiyeed ay isku raacsan yihiin xubnaha ka qeyb galaya shirkan.